Kunconywe umsunguli weskole seNdoni kwinhlokhono ebikwiLembe – Sivubela intuthuko Newspaper
IZIHAMBELI zomcimbi wenhlolokhono yeNdoni Cultural School ebisesifundeni seLembe zincome usihlalo walesi sikole uDkt Nomcebo Mthembu, zathi utshala imbewu yobuntu entsheni.
Kulo mcimbi wokuhlola amakhono entsheni obusedolobheni laKwaDukuza, ekupheleni kwenyanga kaMay, kuqokwe intsha elishumi eyomela isifunda seLembe, njengoba kuzoba khona izifundo zeNdoni zaminyakayonke ezibizwa nge-winter schools, ezihlanganisa izifunda ezili-11 kuzwelonke, eziqala ngoJune ziphethe ngoJuly. Izifundo zeNdoni zandulela umcimbi kaNobuhle owaziwa ngele Miss Indoni Cultural South Africa ozoba seThekwini.
Usihlalo wekomidi le ntsha ngamphansi koMkhandlu weLembe uCllr Lindokuhle Ngidi ubonge uDkt Mthembu, obekhona ngesikhathi kuqhubeka inhlolokhono, wathi wenze umsebenzi omkhulu ngokuvulela intsha yesifunda ukuba ibeyingxenye yesikole seNdoni njengoba siwusizo ekufundiseni inhlonipho nobuntu kanye nokuthanda amasiko.
”Kuyathokozisa ukubona intsha yethu ikhombisa ukuzigqaja ngamasiko ayo. Okunye okusijabulisayo ukuthi iNdoni igxile kakhulu ekufundiseni intsha yethu ngenhlonipho nokuziphatha kahle,” kusho uNgidi
uDkt Mthembu usungule iNdoni ngonyaka ka-2011 ngenhloso yokukhuthaza intsha kakhulukazi, eyabesifazane ukuba basebenze ngokuzimisela ukuze babe abaphumeleleyo ngomuso. Izifundo zibandakanya amasiko, ukuziphatha, ukwazisa imfundo nokunye okuningi.
Omunye wamalungu entsha yeLembe, owayengumfundi esikoleni seNdoni eminyakeni edlule, UMzomuhle Mngoma uthe ufunde lukhulu kwiNdoni.
”Kwangisiza kakhulu ukuba ngumfundi esikoleni seNdoni, njengoba ngifunde, phakathi kokuningi, ukuba ngizigqaje ngesiko lami. Ngiphinde ngafundiswa izindlela zokubhekana nezinselelo zempilo,” kuchaza uMngoma.
Ubonge uDkt Mthembu neNdoni ngokumnika ithuba lokuba yingxenye yabafundi abakhuliswe ngemfundiso yesikole sakhe.
Izethameli ebezikulo mcimbi zizitike ngomculo wesintu, izinkondlo kanye neminye imigidi ehlukahlukene.
Kunconywe owaseHarry Gwala ngokusukumela eyomhlaba